Danilo da Silva Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Vatambi Vanotamba Yevatambi
Welsh Nhabvu Vatambi
Belgian Nhabvu Vatambi
VaCroatia Vanotamba Nhabvu
Czech Republic Nhabvu Vatambi
Danish Nhabvu Vatambi
Vatambi Venhabvu veDutch
Vatambi vechiFrench Vanotamba
Vatambi vechiGerman Vanotamba
Vatambi Vanotamba Nhabvu
Vatambi vechiPutukezi Vatambi
Spanish Vatambi Vatambi
Swiss Nhabvu Vatambi
Cameroonia Nhabvu Vatambi
Ghanian Nhabvu Vatambi
Vatambi venhabvu veIvory Coast
Nigerian Nhabvu Vatambi
Senegalese Nhabvu Vatambi
Vanotamba Nhabvu Vanotamba
Vatambi veBrazil Vanotamba
Columbian Nhabvu Vatambi
Uruguayan Nhabvu Vatambi
Vechidiki veCanada Bhora
Nei Nyaya Dzemwana
Nei Untold Biography Chokwadi
zvoseVatambi Vanotamba YevatambiWelsh Nhabvu Vatambi
Nick Pope Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Eberechi Eze Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Dean Henderson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Eddie Nketiah Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
zvoseBelgian Nhabvu VatambiVaCroatia Vanotamba NhabvuCzech Republic Nhabvu VatambiDanish Nhabvu VatambiVatambi Venhabvu veDutchVatambi vechiFrench VanotambaVatambi vechiGerman VanotambaVatambi Vanotamba NhabvuVatambi vechiPutukezi VatambiSpanish Vatambi VatambiSwiss Nhabvu Vatambi
Alexander Sorloth Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Francisco Trincao Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
William Saliba Utano Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Fabio Silva Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
zvoseCameroonia Nhabvu VatambiGhanian Nhabvu VatambiVatambi venhabvu veIvory CoastNigerian Nhabvu VatambiSenegalese Nhabvu Vatambi
Edouard Mendy Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Andre Onana Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Samuel Chukwueze Upwere Hwenyaya Iyi Nhau dzeS Untold Biography Facts
Habib Diallo Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
zvoseVanotamba Nhabvu VanotambaVatambi veBrazil VanotambaColumbian Nhabvu VatambiUruguayan Nhabvu Vatambi
Matheus Pereira Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Alex Telles Yevacheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Allan Loureiro Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Gabriel Magalhaes Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
zvoseVechidiki veCanada Bhora
Jonathan David Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
NAYE AMERICAN SoCCER STORI
Giovanni Reyna Utariri Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Alphonso Davies Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Christian Pulisic Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
ASIAN FOOTBALL STORI
Lee Kang-muKudhara Nyaya Yevechidiki uye Untold Biography Chokwadi
Faiq Bolkiah Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Takumi Minamino Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Caglar Soyuncu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Tora Kubo Kukura Kwemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
OCEANIA FOOTBALL STORI
Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Mile Jedinak Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts
Aaron Mooy Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts
Mark Viduka Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vatambi veBrazil Vanotamba Danilo da Silva Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhola Genius iyo inozivikanwa nezita racho "Dan". Our Danilo da Silva Childhood Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvekuonekwa kwake kwemaziso. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanoziva zvakawanda pamusoro paDanilo da Silva's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Danilo da Silva Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Kutanga, zita rake rose ndiDanilo Luiz da Silva. Akazvarwa musi we15th waJuly 1991 kuna amai vake, Maria José da Silva uye baba, José Luiz da Silva muBicas, mutaundi weBrazil mumamiriro eMinas Gerais.
Mhuri yaDanilo inobva mumhuri yeBrazil yakasviba iyo ine nhoroondo yekusarura uye kurwisa nzvimbo munzvimbo yeSouth America. Vakabudirira vekuBrazil vakadai saDanilo avo vakagadzirirwa kunze zvino vanobatana nemichato yakavhengana inokonzerwa nematehwe akavhenganiswa.
Danilo akakurira muBicas, masuwa ane vane 13,000 vagari uye maawa anenge 3 kumaodzanyemba kweRio de Janeiro.
Bicas sezvinofananidzirwa pasi apa inowanzokoshesa vatorwa veItaly uye nyika shomanana.
Danilo da Silva Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Career Start
KuDhanilo wechidiki, kuda kwake kuva muteereri kwakauya kuburikidza nekukurudzira kwaakagamuchira kubva kunhau Edson Arantes do Nascimento uyo anozivikanwa se Pele.
Sezvo akakurira mumutaundi umo kusina maturo kunopera kana kune bhora pamakumbo, zvakange zviri nyore kune vechiduku Danilo kusarudza bhora panzvimbo pokuenda kuchikoro. Zvakanaka, Danilo aiva nemakore gumi nemana panguva yekutamba kwebhola. Kuda kwake kwebhola kwakamuona iye mu13 achinyora muboka rake revechidiki, Tupynambás uyo akamupa mukana wekuratidzira tarenda yake. Paaiva pachikwata, achidzidza mhizha yemuenzaniso wake uye mukombe wenyika mbiri Cafu uyo maitiro ake akamudzidzisa kuti angaita sei nzvimbo yake zviri nani.
Mushure memakore maviri ekubuda kwemakwikwi ose ebhodhi kuTupynambás, Danilo akanzwa kudiwa kwekutamba kune kukwikwidza kwebhola. Akafunga kushandura kuAmérica Mineiro vechidiki nechekuBero Horizonte. Danilo akaona chikwata ichi sechinhu chinotungamira kuti chimuendese kumushandi akabudirira kumakore ekupedzisa.
Danilo da Silva Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Simuka Mukurumbira
Danilo pazera remakore 18 akapedza basa rake revechidiki uye akakwidziridzwa kuAmerica Mineiro. Akasimuka pamusoro pemapoka ose ekukwikwata kwebhola mushure mekucherechedza zvinangwa zvakakosha zvechikwata.
Hazvina kutora nguva yakareba pamberi peGrazil giant Santos. Danilo's meteoric yakasimuka paSantos yakasvika panguva yakakodzera. Yakasvika pane imwe nguva yaakawana chinangwa chakakunda 2011 Copa Libertadores (iyo South America yakaenzana neUFA Champions League - kwekutanga kokutanga kubvira 1963). Pasi pane mufananidzo wechidiki ainzi Danilo muCopa Libertadores.
Kubva pakukunda Copa Libertadores pamwe chete Neymar (inoratidzwa pasi apa nehope), kukwanisa kwaDanilo kubata nemukurumbira kwakave zvakananga nenzira yaakabata nayo bhora.
Iyi yakanga iri nguvawo mauto akawanda eEurope akacherechedza kwaari. Sezvakaitwa pa 2012 January firiji kutumira, mapoka kubva kuEurope akatanga kushevedza mabasa ake. Pasinei neshoko rinorema rinobudiswa € 50 mamiriyoni akaiswa pamusoro wake, FC Porto akapfuura kuti amusayine, achibhadhara chikamu chikuru uye mari yekuisa. Izvi ndizvo zvaive zvakaita kuti kurota kwake kuEurope kuvepo. Zvose, (nguva paCal Madrid uye Man City) sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Danilo da Silva Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pasi pemunhu wese mukuru, pane mukadzi mukuru, kana kuti shoko racho rinoenda. Pamberi paDanilo akabudirira, pane imwe nguva yaiva musikana anonakidza mukati meClarice Sales (inoratidzwa pasi apa nemurume wake) uyo akazoshandura mudzimai wake waanoda.
Vose vanodiwa vakasarudza kuva nemwana vasati varoorana. Vaiva nemwanakomana wavo, Miguel pa 9th yaApril, 2015. Pasi pane Danilo nemudzimai wake akanaka uye achangobva kuberekwa Miguel achipembera firimu yake yokutanga yepfuti inobva kuna baba vake.
Mushure memazana e7 ekuve pamwe chete, Danilo naClarice Sales pakupedzisira vakaona kuti yava nguva yekusunga pfumo. Vakaroora musi we 17th musi waJune 2017 muBicas, Brazil.
Vose Danilo naClarice vakawana muchato wavo mangwanani-ngwanani kupfuura zuva ravakaronga. Pakutanga ivo vakaronga mhemberero yavo yemuchato musi waJune 30, 2017, asi vakasarudza kuita kuti zviitike musi we 17 wemwedzi waive mazuva 13 isati yasvika musi chaiwo wemuchato.
Pasi pane mufananidzo wavo wechato pamwe chete nemwanakomana wavo, Miguel. Sezvinoratidzwa pasi apa, nhengo dzose dzemhuri dzinosanganisira kusinganzwisisiki Danilo kutarisa shomanana kupfuura giant wedding cake.
Danilo anotenda kuti mwanakomana wake Miguel (akafananidzirwa pasi apa) aizotungamirira wechizvarwa chechikwata chechipiri cheDanilo Luiz da Silva Family.
Danilo's LifeStyle: Pasina mubvunzo, ndiyo mararamiro aDanilo anokwanisa kubatsira munhu kuvaka zviri nani mufananidzo wehupenyu hwake. Danilo ave akaonekwa kakawanda, achifara nguva yakanaka pamwe chete.
Danilo da Silva Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Kutanga kuenda, Danilo anoonekwa nevateveri semumwe munhu anogara achitarisisa zvakanyanya-uye kunyange pamifananidzo nemhuri yake.
Somugumisiro weizvi, Danilo angave akakanganisa semumwe munhu anokwanisa kuva nemafungiro anonyadzisa. Zvisinei, kubvongodza pasi, tinokupa humwe chokwadi pamusoro pehupenyu hwake.
Nezve simba rake, Danilo anoonekwa sevezera rake semumwe munhu anoramba akabatisisa chero chinhu chakakosha kwaari. Izvi zvinooneka nenzira iyo yaanamatidzira kumhuri yake sekuonekwa muhupenyu hwehukama hwehukama.
Danilo anonyanya kufungidzira (kure uye pamucheto), akavimbika (kunyanya kumudzimai wake). Nezvaanoda, Danilo ndiye mudzidzisi wezvokudya zvekumba. Anoda kusununguka pedyo nemvura uye kuva nekudya kwakanaka nemhuri. Chiratidzo chemukati wechitinha paruoko rwake pasi apa chinoratidza kuti anouya kubva kumhuri yeKaturike.
Nezvezvaasingadi, Danilo haanzwi wakasununguka nevasingazivi. Haafariri kushora kupi zvako kwevabereki vake nekuzarura huzhinji hwehupenyu hwake kune hurumende. Senguva yekunyora, zvishoma zvinozivikanwa pamusoro pehama (s), hanzvadzi (s), babamunini (s) nainini (ivo).
Sezvenguva yekunyora nyaya ino, Danilo uyo ari mupfumi ane mari inofungidzirwa kuti inodarika $ 21 mamiriyoni. Pasinei neCaffu kuva mutungamiri wake, Danilo akambomiririra zvinotevera mumashoko ake;
Ini ndiri munhu wangu chaiye. Handingazvienzanisi nemumwe munhu nokuti ndine zvangu zvangu.
CHOKWADI CHINOGONA: Kuvonga nekuverenga vedu Danilo da Silva Childhood Story Plus Untold Biography Facts. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
FC Porto Nhabvu Diary
Man City Soccer Football DIary
Sergio Reguilon Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Eric Garcia Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Ferran Torres Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Marcos Llorente Upwere HweNhau Plus Untold Biography Chokwadi
Mariano Diaz Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Achraf Hakimi Childhood Nhau uye Untold Biography Facts
Phil Foden Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Mikel Arteta Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Facts
Rodrigo Moreno Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Federico Valverde Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Kasper Schmeichel Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
mitsva yekutsvaga mhinduro itsva mhinduro kumashoko angu
Ona zvese zvataurwa
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 26, 2020
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 25, 2020
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 23, 2020
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 19, 2020
Mubhodhi wese ane nhau yehuduku. LifeBogger inotora nyaya dzinonakidza, dzinoshamisa uye dzinofadza pamusoro pevhodhi dzebhola kubva panguva dzehuduku kusvikira zuva. Isu tiri nyika yakanakisisa yedhiyabhorosi yeChidzidzo cheNhau yeChildren Plus Plus Untold Biography Chokwadi chevhandi vemakwikwi pasi pose.
Taura nesu: lifebogger@gmail.com
Ndingade pfungwa dzako, ndapota taura.x
Joao Cancelo Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Fabian Delph Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Kubvumbi 15, 2020
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Santiago Solari Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: June 29, 2020
Andre Gomes Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts